Relaxing Trisquel, Slackware and Puppy + na-agba akwụkwọ ahụaja maka Gimp | Site na Linux
Maxwell | | Ọdịdị / Nhazi, Imebe, GNU / Linux, Ndị ọzọ
Inghụ mbipụta nke na akwụkwọ ahụ aja nke mcder, egbula oge maka nke abụọ ị chọrọ otu Trisquel. Ọ bụ ezie na eziokwu m bụ egwu na njikwa Gimp, mgbe obere oge nke pestering ren-cs, o mechara kweta inyere m aka.
Ọ bụ ya mere m ji gwa ya ka ọ bịa detuo na akwụkwọ ahụaja ma mee otu n'ime Trisquel, na ekweghiekwe mere otu onye Puppy y Slackware.
Ejim ohere a kesaa ya na-agba na Gimp na m na-eji ugbu a na isiokwu ya Ngalaba 0.8 de ANAWM, nke o mekwara.
Enwere m isiokwu ahụ na Oxygen-Refit 2 Orange Version icons na gtk Orangine isiokwu. Ee, ọ bụ nnukwu oroma.
Nke a ka anyị ji mechie obere ntinye a. Enwere m olileanya na ị masịrị ya dịka m siri mee, nwee ezigbo ụbọchị, na biko ndo maka nsogbu obula nwere ike ime gi Ren XD.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ighaghari akwụkwọ ahụaja nke Trisquel, Slackware na Puppy + splash maka Gimp
Eziokwu bụ na Slackware otu ga-ahọrọ ya na akara S mana ọ masịrị m ndị ọzọ
Eziokwu. Enweghị m mmasị na Slackware. Ọzọkwa mgbe ị na-ejuputa onyonyo zuru ezu, a na-atụgharị akwụkwọ ozi.
M ga-eke akwụkwọ ahụaja m na egwuregwu nke ohere na ndị akwụna, ihe ọzọ, chefuo akwụkwọ ahụaja ahụ.
N'eziokwu, na S of Slackware dị ka akara ngosi na akwụkwọ ahụaja ọ ga-abụrịrị ụda, ebe ọ bụ na akwụkwọ ahụaja ndị ọzọ nwere akara ngosi ahụ, onyinye ahụ ka na-enwe ekele dị ukwuu 😀
Ekele atụtụ ^ _ ^
Eee, mana ọ bụrụ na m gwa ya ihe ọ ga-eme, emesia ọ ga-ewesa m iwe, maka na obi dị anyị ụtọ na anyị ekwubeghị xD. Achọrọ m isiokwu Sakura m, n'agbanyeghị na echere m na o kwuru ihe banyere ịme isiokwu Ọnwụ ma ọ bụ Gantz.
Ọ dabere na sakura nke anụ ọhịa, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka «kaadị captor» ... abụghị ezigbo pink: O
Echi m ga-ewepụta mmelite na akwụkwọ ahụaja Slackware nn
Otu maka puppy Linux dị mma. 🙂
Mgbatị Xfce 4.10 na-egbu oge